Dad Soomaali ah oo kamid noqday dadkii lagu dilay weerarada masaajida New Zealand – Somali Top News
Dad Soomaali ah oo kamid noqday dadkii lagu dilay weerarada masaajida New Zealand
Lix Qof oo ay Saddex ka mid ihi Soomaali ahaayeen ayaa ku geeriyootay, weerar uu Nin Hubeysan weeraray Masjid lagu Magacaabo Al-Nuur oo ku yaalla Magaalada Christchurch ee Dalka New Zealand.
Dadka dhintay oo lagu kala Magacaabo, Sheekh Muuse Nuur Cawaale, oo ahaa Macallin Dugsi, Sheekh Cabduqaadir iyo Cabdullaahi Aadan Diiriye oo ah Wiil Lix Sano jir ah, halka uu dhaawac kasoo gaaray Aabihii oo la yiraahdo, Aadan Diiriye.
Masjidkan oo Dadka ku sugnaa ay isu diyaariyeen Tukashada Salaadda jimacaha ee Maanta ayaa lagu qiyaasay 200 Qof, waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay Muslimiin kale oo halkaasi ku cibaadeysanayay.
Boliiska ayaa sheegay in Ninka weerarka geystay uu ka yimid Dalka Australia, bar-tilmaameedkuna uu ahaa Laba Masjid oo halkaasi ku yaalla.
Ninkan weerarka geystay ayaa la sheegay taageersan yahay afkaarta midigta fog, kana soo horjeedo Dadka soo galootiga ah.
Ra’iisul wasaaraha Dalka , New Zealand, Jacinda Ardern, ayaa sheegtay in ay Dalkeeda u tahay Maalin madoow, aadna ay ugu xun tahay wixii dhacay.
Booliska Magaalada Christchurch, ayaa baadi goobaya Ninka falka geystay, iyagoo isweer ka qabtay goobaha looga shakisan yahay in uu ku dhuumaaleysanayo oo ay ka mid yihiin Iskuullada, Suuqyada iyo Isbitaallada.
← Toogasho ay ku dhinteen dad muslimiin ah oo ka dhacday dalka New Zealand
49 killed as gunmen open fire in two mosques in New Zealand →
Cadeymo: Soomaaliya oo marti ku ah shir u gaar ah shidaalka wadankeena
Nolosha Shacabka Muqdisho oo sii xumaanesa kadib markii dowladda ay xiratay wadooyinka